Cabdulqadir Lugga-Dheere :-361-Ergo Rabitaan kooda ayuu shirka ...............
Guddoomiya Ururka USC/PA ahna Guddoomiyaha Siyasada Beesha Shiikhaal Muddne Cabdulqadir M.Xaaji Lugga-dheere ayaa maanta shaaca ka qaadey in shirkan uu ku guulaysan doono rabitaank 361-Ergo iyo midnaantooda.
masuulka oo saakey ii waramay waxa uu sheegay in Arrinta y ku timid adkeysiga iyo dulqaadka Ergada Soomaaliyed oo metesha Dhamaan Ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan.
Lugga-Dheere ayaa sheegay in arrinta Kulanka Gooni u baxa uu la qabo hogaamiyayaasha Siyaasada ee tirada dadka ka qaybgalaya ku adkeystey 24+Cabdiqaasim oo nabada lagu soo dabaalayo,wixii in taa ka dib Anigoo ku hadlaya Magaca Ergada waxaan aaminsan nahay in shirka uu marayo wajifga Wajiga 3-aad madaama ergada ansixisay dastuurkii lagu dhali lahaa Dalda la rabo in shirkan ka dhisanto.
Guddoomiyaha USC/PA mar uu ka hadlayey guddoomiyayasha jooga Magaalada Jawhar waxa uu sheegay in ay ku maqan yihiin hawl lawada Ogsoon yahay ,waxaana Beeniyaya in uu Maxamed Dheere Oran yiri shirka waan ka baxay.
ugu danbeyntii waxa uu lugga -Dheere hambalyadda sanadka cusub u diray isagoo ku hadlaya Magaca Ergada Soomaaliyee ee shirka ka qayb galeysaiyo Hogaamiyayaasha Soomaalida dhamaan Ummada Soomaaaliyeed ,gaar ahaan taageerayaasha USC/PA oo jooga Jilib ,jmaame iyo Kismaayo oo xaqooda u dagaalmauya in sanadkan kiisa kale ku gaaraan Bash Basg iyo Barwaaqo .
Cabdullahi Yuusuf:-Daahir Riyaale iyo Cabdiqasim ayaa burbrin ku.....
warsaxaafadeed uu soo saarey Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntuland ayaa ku cadeyey in shirka dib u heshiisiinta Soomaalida ee ka socda Mbagathi qas iyo burbrin ku hayaan labbada nin ee raba soomaali maanta in ay dawlad loo dhan yahay ka dhalan,war saxaafadeedkan ayaa maanta ku qaybiyey tageere Puntulnd State Grand Regency Hotel ee Nairobi.
cabdullaahi yuusuf ayaa warsaxaafadeed ku wargaliey Beesha Caalamka iyo Adduun weynaha in dagaal u dhaxeeya Puntuland iyo SomliLand uusan aheyn dagaal guud oo ay raali ka yihiin dadweynaha ku nool soomaaliland ee waa qorshe maalin walba uu si joogto ah u sameeyo Daahir Riyaale oo ku fadeexoobey siyaasada shacabka Soomaali land.
waxa kaloo qoraalka ku qornaa in shirkan Wadahadalada Nabad ee ka socda Kenya ay qas iyo dudumin ku hayaan Cabdiqasim iyo Daahir riyaale kaahin.
Gobolada SOOL,SANAAG iyo CEYN in ay hoos yimadaan Maamulka Dawlad Goboleedka Puntuland,
hadaba waxaan Beesha Caalamka iyo Dawladaha Afrika Ogeysiinayaa shirkan Nabad ee ka socda Kenya laga dhaliyo Dawlad waa in Soomaliya lga Qabtaa labaasi Nin Daahir Riyaale iyo Cabdiqasim oo raba in ay dawlad iska sheegtaan Ummadana waxba u qaban.
Ergada Puntulanda ayaa intood badan ka tegtay Madasha shirka iyagoo u socda Gobolada ay Maamusho Puntuland State oo ay horey uga yimaadeen,xafiiska maamulka Puntulnd ee Madsha shirka ayaa shaley la xiray gebiahaantiisa.
Xiritaanka xafiiska ayaa dhawr maco loo qaadan karaa,Siyaasiyiin Qaar ayaa aaminsan in ay puntuland Shirka ka baxdey oo tirada yah ay joogtaan iyaguna maalmo ka dib bixi doonaan,qaar ayaa aamin in ay dib u soo noqon doonto sababo dagaalka ka socda Sool,Sanaag iyo Ceyn.
Hogaamiyayaasha Soomaalida OO soo saarey Go`aan ku aaden Kulanka 9-janaayo ee Nairobi.
warsaxaafadeed ay ku saxiixan yihiin Hogaamiyayaashga Soomaalida ee ku sugan Madasha Shirka ayaa maanta laga soo sarey Grand Regency Hotel oo ku yaala magaalda Nairobi.
warsaxaafadeedkan ayaa ka duwaneyn ku wixii ee ku qornaa qoddobodan saxiixa marka laga reebo.
qodobada ku qornaa ayaa kala ahaa:-
1-tirada Hogaamiyayaasha Soomaalida ka qayb galaya waxaan ogolnahaey 24+candiqasim
2-in la soo bandhigo qodobada looga hadlayo ka hor inta aan laqanab kulanka 9-Janaayo,2004.
wixii intaa dhaafsiisn waxaan Beesha caalamka iyo adduunweynaha u sheegaeynaa in shirkan haddii uu burburaa anaga dusha nala saarin.
suaalo dhawr oo wariyayaasha waydiiyeen ayaa ka mid ahaa in haddii intaasi la waayo tal;aabada xirta ee la qaadayo ama shirka lagu badbaaniyo oo ad qabtaan maxay tahay ?
Morgan iyo Mawliid :-haddii intaa la waayo waxaa raacayaa habsocodka shirka oo loo dejiey 15-bishii Oktober,2004.
Suaal:-ma dhib oo ku jira haddii tirada dadka la kordhiyo ?
Morgan iyo Mawliid :-ma qaadan karno in IGAD halkan ku abuurto Hogaamiyayaal cusub oo aan soo dooran dadka ay sheeganayaa.
Su`aal :-malaga yahaa in aad isu timaadaan tiro dhexdhexaad ah idinka iyo IGAD iyo Beesha Caalam oo 25-qof iyo 42-qof ?
Morgan iyo Mawliid :- tira kale iska daa 26-qof aanu kuma jirno.
suaal :- in aad shirka ka baxdaan haddii lagu heshiin waayo intaa ad soo sheegteen ?
Morgan iyo Mawliid:-ma laga yaabo in aan shirka ka baxno ilaa dawlada kenya iskeeda iyada wadiweydo.
su`aal :-waxaa la hadal hayaa in aad wadaan qorshe dawladeed ku dhistaan magaalada jawhar haddii uu shirka fashilmo ?
Mawliid iyo Morgan:- Waa la isku soo qaadey in aan wax u dhisno ummada soomaaliyeed oo naga warsugaya ,waxaa sharaf darro noo ah in aan maamul ama dawlad u dhisi weyno dadkeen inagoo shirka dib u heshiisiinta Soomaalida joogney 14-bilood.
Magacyada Hogaamiyayaasha soomaalida ku saxiixan warsaxaafadeedka.
1-Xasam Abshir faarax -TNG-
2-Cabdala Derow Isaaq -TNA-
3-Col.Hassan Maxamed Nur Shaati gaduud - RRA/SRRC-
4-Abdullahi Yuusuf Axmed -Puntuland State-
5-Mohamed Qanyare Afrax -USC/G8-
6-Hussein Mohamed Farax Aideed USC/SNA/SRRC-
7- Aden Mohamed Nur ,Chairman RRA/SRRC
8-Moawliid Moane Mohamuud Chairman Samo/G8
9-Hilowle Iman Omar Chairman USC/WM/SRRC
10-Omar Mahamed Mohamuud Chairman USC/SSA/G8
11-Mohamuud Sayid Aden Chairman of SNF/SRRC
12-2Mohamed Omar Omar habeeb chairman JowharAdm.
13-Abdullahi Sheekh Ismail Chairman SSNM/BIREM/SRRC
14-Mohamed Aden Wayel Chairman SPM/Nakuru/SRRC
15-Gen.mohamed Saiid Hirsi Mogan Chairman SPM/SRRC(Morgan)
16-Hassan Abddula Qalad Chairman HPA/SRRC
17-Abdul Asiis Sheik Yusuf Chairman SSNM/SNA/SRRC
18-Ahmed sheik Mohamed Chairman SPM/SRRC
19-Mohamed Osman Maye Chairman SANU
F.Gaar qoraalka oo wata saxiixa ka soo xiriir Tel:-254-721-215-705,ama E- Addreska abdikarimhussein@hotmail.com , abdikarimhussein@lycos.com ,ama akariim@yahoo.com
Boqor Abdullaahi :-SOOL,SANAAG IYO CEYN MAAMULKA WAA PUNTULAND ,DEGAANKUNA WAA SOMAALI LAND.
Wareysi:-wareysigan waxaa uu ku Saabsan Xaal Nabdeed ee Degaanada SOOL,SANAAG iyo CAYN oo ay isku haystaan Somali Land iyo Puntuland.
waxaana wqareystay Boqor Abdullahi Axmed Cali oo ka mid ah Isimada Degaanada SANAAG,SOOL iyo CAYN ee Beesha DHulbahante iyo Guddoomiyaha Siyaasada Beeshaasi EE shirka Muddane Maxamamuud Duaale Muuse (Xaaji Kafe).
Wareysiga ayaa waxaa kaloo uu ku saabsan yahay Xaalda Degaanadaasi waqtigan Xaadirka ah iyo arrimaha Shirka Dib u heshiisdiinta.
wareysigii waxa uu u dhacey sidan:-
Abdikarim:-Boqor waxaad ka warantaa xaalada Nabadeed ee degaanada SOOL,SANAAG iyo CEYN ?
Boqor Abdullahi:-BISMILAAHI RAXMAANIRAXIIM Gobolaadi arrintoodu waxaa kaga nimid arrin degan oo maamul u socdo wax dhibaato ka jirin oo xriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo Isimada,maamulada iyo wax garadka xriir leeyihiin wada shaqeyn iyo nabadgelyo ,aan sidaa ku sii wadno oo aan gaarsiino dhamaan ummada soomaaliyeed gedi ahaan,Gobol walibana gobol ka waraabiyo .talooyinka ay ka dhaxeeyaan,marba wixii xun laga hor tago nabada la soo dhaweeyo,sidaan ayaan arintooda ku ogeyn wixii hadda dhacana waa isla eegeynaa.
Abdikarim:-Madamo ay dagaalo ka aloosan yihiin gobolada aad isimka sidee hada xaaladoodu tahay ?
Boqor Abdullaahi:-waxaan u arkaa in goboladaa dadkaa degan wax dagaal ka socon karaa aheyn,dad dan iyo nabadgelyo iyo tal ka dhaxeyso weeye,cid ddweynahaa gobolka degan dagaal ku aloosi kartaa ma jiraan,iyaguna dagaal dad niyo u haya oo doonaya ma aha oo waa dad ka soo daalay sidaas ayaa ku ogahay,dee hada meeshii ma joogo laakiin waxaan garanayaa dadka aan aqaan shacuurtaan ogahey,haddii cidi hawl hagaajiso hadde ma aha wax cid loola danlee yahay ama ku dhacayaan,dadku in uu maamul yeesho hawshiisu socoto oo nabadgelyadda laga wada shaqeeyo,waaa wax lagu og yahay oon loo ogoley in wax isku dhac iyo dhibaato ka timado,anigu marka aan hadlayo gobolaadaa anigu aabahey waa Puntuland ,hooyadeyna waa Soomaaliland dad goboladaaasi wada degaaye,waa sidayda oo kale oo wiil iyo abtigiis walogood isma dagaalyn.
Abdikariml:-goboiladaasi waxay u dhaxeeyaan Somali Land iyo Puntuland ee xageey ka tirsan yihiin ?
Boqorka:-Maamulka waa Puntuland degaanku waa Somaali Land.
Abdikarim:-Boqor ka waran arrimaha shirka iyo habaca soo galey ?
Boqor Abdullaahi:-anigu waxaan ku jiray Isimada la keenay 5-tii ogosto,shirka habaca soo galey waxaa weeye daldaloolo aan ka arko beesha caalamka ,IGAD iyo Hogaamiyayaasha oo iyaguna is eegaya oon ku fikirey in ka tashadaan danahooda iyo tan shacabka soomaalida ooy ka wkiil yihiin.
Abdikarim:-Ugu danbeyn maxaad u jeedineysaa shacabka Gobolada aad isinka katahay iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ?
Boqor Abdulaahi:-horta tan gobolada dadka deggan kalsooni weyn ayaan ku qabaa ee wax qasaaro iyo dagaal kama dhci kari goobahaasi ,mana la isku dagaali karo ,waa dad walaalo ah oo caysh iyo ceel wada dhaansada ,waxaan u sheegayaa in aan laga faaideysan oo ay dana hooda gartyaan.
tan shirka waxaan lee yahay hogaamiyayaasha Soomaalida iyo Soomaalida waxaa u roon oo waligeed lagu yiqiin in ay iyagu danahooda ka tashadaan ooyan dad shisheeye wax ka sugin.
Bpqor Abdullaahi:-Adigaa mudan.
waxaan kaloo wareystey Guddoomiyaha Beeshaasi ee Gobolada SANAAG,SOOL IYO CAYN ee shirka wadahadala Nabada Soomalida Muddane Maxamuud Du`aale Muuse (Haji Kafe).
Abdikarim:-ka waran arrimaha siyaasada beesha ee goboladasi ?
H-Kafe:-beeshayadu waa sida uu kuu sheegay isimka ,waxaan anagu dagaalka horey ugu soo daalney xiulligii sayid Mxamed Cabduule Xasn Taariikhdaa qoray ,mideda kale goboladaasi wax dhib oo ka dhci karaa ama ay geysan karaa ma jiraan anagaa deg oo masuulka ak xaaladooduna waa nabad boqolkiiba boqol.
Abdikarim:-ka waran arrimaha shirka ?
H-kafe:-shirka soomaalida iyadaa goaanka leh ee waxaa nasiib darro ah in walalkaa adiga kaa cararo oo afka galo berrina adigoo kuguy cabnaadayaa,micnaheyga wax kale maaha ee waa in lawada tashadaa oo arrimaha inga dhaxeeya aan ka wada hadlno,ee maha in arrinta soomaaliya hogaamiye kaliya kja tashado.